Musharixiinta Koonfur Galbeed oo khudbadahooda jeedinaya (dhegayso) – Radio Daljir
Musharixiinta Koonfur Galbeed oo khudbadahooda jeedinaya (dhegayso)
Diseenbar 16, 2018 10:42 b 0
Musharixiinta doorashada madaxwayne ee Koonfur Galbeed ayaa maanta bilaabay soo bandhigga wax qabadkooda haddii ay ku guulaystaan doorashada Koonfur Galbeed ee maalmo ay ka harsanyihiin.
Doorashada Koonfur Galbeed ayaa waxaa ku loolamaya kudhowaad toban musharax, waxaana ay dowladda ay xirtay Mukhtaar Roobow oo ka mid ahaa aasaayaashii Al-shabaab, kaasi oo ka mid ahaa musharixiinta madaxwaynaha Koonfur Galbeed.
Khudbadaha oo socda ayaa waxaa goob joog ka ah dhamaan musharixiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoona maanta xaaladdu tahay mid degan.
Hoos kadhegayso Aadan Saran Soor oo msuahrixiinta ka mid ah.
Xabsiga Godka Jilicow ee Muqdisho oo la xiray
Maxaad kala socotaa shirka Xalane iyo dadaalada loogu jiro siidaynta Roobow ? (Akhirso )